Mucaaradka Burundi oo hakinaya wadahadal ay la galaan dowladda - BBC Somali
Mucaaradka Burundi oo hakinaya wadahadal ay la galaan dowladda
Image caption Rabshado ayaa ka billowday dalkaasi kaddib markii madaxweynaha uu shaaciyay in uu xilkaasi u tartamayo mar saddexaad.
Mucaaradka dalka Burundi ayaa sheegaya in ay hakinayaan wax wadahadal ah oo ay la galaan dowladda dalkaasi kaddib markii sabtigii toogasho lagu dilay hoggaamiyaha xisbi yar oo mucaarad ah.
Meydka Zedi Feruzi ayaa laga helay bannaanka hore ee gurigiisa oo ku yaala magaalada Bujumbura ee caasimadda dalkaasi.
Hoggaamiyahani ayaa waday olole uu ku diidan yahay damaca madaxweyne Pierre Nkurunziza ee ah in uu mar saddexaad u tartamo xilkaasi.
Waxaa la rumeysan yahay in qaramada midoobey iyo midowga afrika ay isku dubaridayeen wadaxaajood u dhaxeeya dowladda, xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka, si loo dejiyo xasaaradda ka aloosan dalka Burundi.
Go’aanka madaxweyne Nkurunziza ee ah in uu xilkaasi u tartamo mar saddexaad ayaa waxa ka dhashay inqilaab milatari oo markii dhicisoobay, dibadbaxyo qaatay usbuucyo iyo in inkabadan boqoqol kun oo qof ay dalkaasi ka barakacaan.